बिर्सने रोग (डिमेन्सिया) बाट बच्न के गर्ने ? यस्तो भन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका - Health Today Nepal
बिर्सने रोग (डिमेन्सिया) बाट बच्न के गर्ने ? यस्तो भन्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका
May 16th, 2019 मानसिक स्वास्थ्य0comments
एजेन्सी,जेठः विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बिर्सनेसँग सम्बन्धी एक किसिमको रोग डिमेन्सिया हुनसक्ने खतरा कम गर्न पहिलो निर्देशिका प्रकाशन गरेको छ । उक्त रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा अर्थ्याउदै संसारभरि करिब ५ करोड मानिस डिमेन्सिया रोगको सिकार बनेको जनाएको छ ।
उक्त सङ्ख्या आगामी ३० वर्षमा तीन गुणा बढ्न सक्ने बताइएको छ। मानिसको सम्झन सक्ने क्षमतामा असर पुर्याउन सक्ने उक्त रोगबाट बच्न स्वस्थ र सक्रिय जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तु निर्देशिकामा समेटिएको छ । अति शंका गर्नेलाई विर्सने रोग लाग्ने खतरा अत्यधिक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
डिमेन्सियाको उपचार पत्ता लगाउन वर्षौं लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। डिमेन्सिया लाग्नुको प्रमुख कारण मध्ये एक वृद्धा अवस्था रहेको बताइएको छ । तर वृद्ध अवस्थामा हुने यो प्राकृतिक वा अपरिहार्य परिणाम भने होइन। रोगबाट बच्न स्वस्थ आहार लाभदायी हुने भए पनि भिटामिन चक्की सेवन गर्नुले भने त्यसबाट बच्न कुनै किसिमको सहयोग नगर्ने उक्त निर्देशिकामा सुझाइएको छ ।
डिमेन्सियाबाट बच्न धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, शारीरिक वजन, उच्च रक्तचाप र अत्यधिक कोलेस्टोरेलल जस्ता विषयमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निर्देशिकामा उल्लेखित अन्य कुराहरुः–
व्यायामः वयस्कहरू खासगरि ज्येष्ठ नागरिकहरूले हप्तामा कम्तीमा १५० मिनेट हिँड्ने वा अन्य शारीरिक व्यायाम गर्ने। दैनिक घरको काम गर्ने वा साइकल चलाउने।
धुमपान त्याग्नेः धुम्रपान मस्तिष्क र शरीरको लागि खराब हुन्छ।
खानपानमा ध्यान दिनेः स्वस्थ र जैतुनको तेलयुक्त भूमध्यसागरीय शैलीको खानामा पर्याप्त सागसब्जी र फलफूल हुन्छ। त्यो स्वस्थकर हुन्छ।
भिटामिनको भर नपर्नेः भिटामिनको चक्कीले फाइदा नै गर्छ भन्ने छैन।
रक्सी नपिउनेः धेरै रक्सी सेवन हानिकारक हुन्छ। थोरै रक्सीले फाइदा गर्छ भनिएपनि त्यो निश्चित हुँदैन।
दिमागको व्यायामः शब्दहरू बनाउने क्रशवर्ड्स् र केही कम्प्युटर खेलहरूले लाभ दिन सक्छन्।
सामाजिक हुनेः साथीसङ्गीहरूसँग मिल्ने र हेलमेल हुने बानीले फाइदा पुर्याउने गर्छ।
उच्च रक्तचाप रोक्नेः उच्च रक्तचाप ओषधि सेवन गरेर वा अन्य उपाय गरेर घटाउनु पर्छ ।
मधुमेहको उपचार गर्नेः मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राखेमा डिमेन्सिया जटिल हुन पाउँदैन।
उच्च कोलेस्टेरोलदेखि सावधानः उच्च कोलेस्टेरोलले डिमेन्सियाको जोखिम बढाउछ। त्यो घटाउने औषधिले काम गर्छ भन्ने छैन ।(बीबीसी)
Previous article प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा पहिलो पटक ‘फाइमोसिस’ सेवा शुरु
Next article भक्तपुरमा पनि मुख्यमन्त्री–जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सुरु